Ndewo, unu niile
Ndewo, unu niile 2 afọ 6 ọnwa gara aga #1006
Ndewo m Chris si Blackpool, abụ m ụgbọ elu na-anya ụgbọ elu kemgbe ọtụtụ afọ. Amalitere fs98 wee nwee ọganihu n'ime incarnates niile kemgbe. Na nso nso a tụgharịrị FSX mgbe anyị nwetara PC ọhụụ nwere ike ịme ya nke ọma. Na-enwe obi ụtọ na ụgbọ elu obere oge dịka enweghị m oge maka ndị toro ogologo. Achọtara saịtị a na-achọ ndụ maka ụgbọ elu ndabara na dịka ọ dị mfe iji ya ugbu a na ndepụta ọkacha mmasị m.
Oge ike page: 0.151 sekọnd